true suppression /zu-ZA/tools-for-life/suppression/steps/the-antisocial-personality.html read 2 11 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/suppression_zu_ZA.jpg Imbangela Yokucindezeleka
Umuntu Ongenabo Ubuntu unezimpawu ezilandelayo:
1. Ukhuluma kuphela ngezindlela ezibanzi (izitatimende ezinganikezi mininingwane). “Bona bathi…,” “Wonke umuntu ucabanga…,” “Wonke umuntu uyazi…” nezitatimende ezifanayo zisetshenziswa njalo, ikakhulukazi lapho kusakazwa amahlebezi. Isibonelo, UmuntuOngenabo Ubuntu angasabalalisa amahlebezi, afana nokuthi “Akekho umuntu othanda ukuya kule ndawo yokudlela; wonke umuntu uyayizonda yona.” Lapho ebuzwa “Ubani wonke umuntu?” wenza sengathi kungumbono womphakathi wonke. Kuvamile ukugcina kuvela ukuthi uyedwa kuphela umuntu owakusho lokho nokuthi lowo muntu oyedwa Umuntu Ongenabo Ubuntu uqobo.
Lokhu kungokwemvelo kuMuntu Ongenabo Ubuntu, ngoba kuye wonke umphakathi ungumuthi omkhulu, onobudlova obubanzi, kubuthelwe ngokumelene noMuntu Ongenabo Ubuntu ikakhulu.
2. Umuntu onjalo usebenza ikakhulu ngezindaba ezimbi, izinkulumo ezigxekayo noma ezinobutha, ukungavumelekile (okwenza umuntu abonakale engalungile noma engafaneleki) nokucindezelwa okujwayelekile (izenzo ezehlisela abanye phansi, zibenze bahluleke, njll.).
Azikho izindaba ezinhle noma ukuncoma okudluliswa ngumuntu onjalo.
Ukwenza isibonelo, ake sithi intombazane encane yayifunda ukudlala upiyano. Umuntu Ongenabo Ubuntu angahle enze ukuphawula ngokuthi intombazane beyenza amaphutha kanjani futhi idlala amanothi amaningi angalungile (ukugxeka) bese ithi upiyano luyinto ayizondayo (ukuphawula okunobutha) abesetshela intombazane ukuthi ayinalo ithalente eliyisisekelo futhi angeke ize ikwazi ukudlala upiyano kahle (ukucindezela).
3. Umuntu Ongenabo Ubuntu udidanisa ukuxhumana lapho edlulisa umyalezo noma izindaba. Izindaba ezimnandi ziyavinjwa kanti izindaba ezimbi kuphela, ezivame ukufakelelwa, ziyadluliswa.
Umuntu onjalo futhi uzishaya sengathi udlulisa “izindaba ezimbi,” empeleni ezisungulwe nguye.
4. Enye yezinto ezidabukisa kakhulu mayelana noMuntu Ongenabo Ubuntu ukuthi akathuthuki noma abengcono njengomphumela wokwelashwa akutholayo.
5. Sizungeza umuntu onjalo, sithola amalungu omndeni ethusiweyo noma agulayo noma abangane labo,uma ngempela bengenziwanga ukuba basangane, bayehluleka.
Abantu abanjena ababethusiwe noma abaguliswa Umuntu Ongenabo Ubuntu benza inkathazo kwabanye.
Uma belashwa noma befundiswa, abantu abaxhumene noMuntu Ongenabo Ubuntu ababi ngcono futhi bahlale ngaleyondlela futhi abazizwa bejabule isikhashana futhi bahlale bezizwa bekahle. Ngokushesha baqala ukugula futhi noma bangajabuli, ngokuba ngaphansi kolawulo loMuntu Ongenabo Ubuntu.
Lababantu futhi abavamile ukululama ngesikhathi esilindelekile ezifweni zomzimba, noma ngabe belashwa ngamayeza. Esikhundleni salokho bayaqhubeka babe nokululama okuncane.
Isibalo esikhulu sabantu abasanganayo basanganiswa ukuba nokuxhumana nabantu abanje abangenabo ubuntu futhi abalulami kalula ngesizathu esifanayo.
6. Umuntu Ongenabo Ubuntu uhlala ekhetha ukukhomba okungalungile (imbangela yezinto) ngokuthukuthela kwakhe.
Uma isondo lemoto yakhe lehlile emuva kokushayela phezu kwezipikili, we thuka umuntu ahamba naye—i-source engesiyo yenkinga. Uma umsakazo kamakhelwane ukhalela phezulu, ukhahlela ikati lakhe.
Uma u-A eyimbangela esobala, Umuntu Ongenabo Ubuntu usola u-B noma u-C noma u-D.
7. Umuntu Ongenabo Ubuntu akakwazi ukuqeda iphrojekthi noma isenzo.
Uzungezwa ngamaphrojekthi angaphelelanga nezinto ezaqalwa futhi ezingakaze ziqedwe.
8. Iningi laBantu Abangenabo Ubuntu kalula nje lizovuma kwathuthumelisa kakhulu amacala, kepha ngeke abe nomuzwa wokuzibophezela kuwo.
Izenzo zabo azinakho nokuncane noma utho olunokwenza ngokukhetha noma izinqumo zabo. Izinto “zimane zenzeka.”
Abanakho ukucabanga ngalokho okubangele okuthize nokuthi abawezwa namahloni noma ukuzisola uma benze okuthile okungalungile.
Isibonelo, Umuntu Ongenabo Ubuntu angantshinga ngokunganaki into ethize esindayo efasiteleni lesakhiwo futhi alimaze kakhulu umuntu omile ngaphandle. Angeke ezwe nokuthi kukhona akwenzile okungalungile. Uzovele asole lowo muntu ngokuhamba edlula ewindini lapho entshinga okuthile ngaphandle kwalo.
9. Umuntu Ongenabo Ubuntu usekela kuphela amaqembu abhidlizayo futhi uhlasela naliphi iqembu elakhayo noma iqembu elisebenzela ukusiza abantu.
10. Loluhlobo lobuntu luvuna kuphela izenzo ezonakalisayo futhi lulwa nezenzo ezisebenzayo noma ezisizayo.
Umqambi, ikakhulukazi, uvame ukuhlaselwa futhi acindezelwe Abantu Abangenabo Ubuntu, ababona kubuciko bakhe okuthile okufanele kubhidlizwe futhi, “njengomngane,” azame ukukwenza lokho ngemuva komhlane wakhe.
11. Ukusiza abanye kungumsebenzi oqhuba Umuntu Ongenabo Ubuntu acishe asangane. Imisebenzi ebhubhisayo egameni losizo, noma kunjalo, isekelwa kakhulu.
12. Umuntu Ongenabo Ubuntu unomuzwa omubi wokuthi ngubani ongumnikazi wezinto futhi ucabanga ukuthi umqondo wokuthi kunomuntu ongumnikazi wanoma yini ungamanga okwenziwa ukukhohlisa abantu. Kuyena, akukho lutho olungake ngempela lube nobunikazi.